Soo dhowaanshaha qoorta (prolapse qoorta) | Astaamaha, daaweynta, jimicsiga, talo ++
Qoorta oo soo booddo
Soo-dhaca qoorta (prolapse afka ilmo-galeenka)
Soo noqoshada qoorta waa xaalad dhaawac ah mid ka mid ah saxannada intervertebral ee laf-dhabarka ilmo-galeenka (qoorta). Soo noqoshada qoorta (qoorta qoorta) waxaa loola jeedaa in cufnaanta jilicsan (nucleus pulposus) ay ku riixday derbiga bannaanka ee ka sii jilicsan (annulus fibrosus) sidaasna ay ku cadaadinayso kanaalka laf-dhabarka.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in soo noqoshada qoorta ay noqon karto astaamo ama astaamo. Cadaadis ka dhan ah xididdada dareemayaasha ee qoorta, xanuun qoorta iyo xanuun dareemeyaasha gacanta ku dhaca ayaa la kulmi kara si la mid ah xididka dareemayaasha oo xanaaqsan / kala jiida.
Qodobkaan waxaan uga hadlaynaa wax badan oo ku saabsan:
Jimicsiga Xoog iyo Kala-bixinta ee Qoorta oo Soo Noqota (Video)
Calaamadaha Burburka Qoorta
Waxyaabaha Sababa Hoos u Dhaca
Yuu Ku Dhicaa Qoorta?
Baadhista Qoorta oo Soo Noqota
Daaweynta Burburka Qoorta
Jimicsiyada qoorta u soo baxda
Hoos udhaji si aad u aragto fiidiyooyin tababar oo dheeraad ah oo jimicsi fiican kuu leh prolapse qoorta.
VIDEO: 5 Lebbis Dhar ah oo ka dhan ah Stiff Neck iyo Xanuunka Neerfaha ee Qoorta
Feejida qoorta iyo murqaha qoorta oo kacsan badanaa (nasiib daro) gacanta ayey ku socdaan. Tani waa sababta oo ah agagaarka dhaawaca disc inta badan wuxuu noqdaa mid aad u xanuun badan oo xasaasi u ah sidaas darteedna keenaya murqo aad u badan. Adeegsiga joogtada ah ee jimicsiga fidinta fudud ayaa gacan ka geysan kara sii deynta cadaadiska dareemayaasha xanaaqsan isla markaana ku kala furfurma murqaha qoorta adag.
Shantaan dhaqdhaqaaq iyo jimicsi fidinta waa kuwo jilicsan oo la jaanqaadi kara.
Dad badan ayaa qiyaasaya muhiimada ay leedahay garabka u shaqeynta qoorta oo caafimaad qabta. Adigoo xoojinaya garbaha iyo garbaha garbaha, waxaad yareyn kartaa murqaha culeyska badan ee saaran, kalagoysyada adag iyo xididdada dareeme kacsan. Barnaamijkan tababarka wuxuu ku tusayaa sida loogu tababaro leyliska si loo helo waxtarka ugu badan ee jimicsiga.
Qeexid - Soo-baxa ilmo-galeenka
'Prolapse' waxay muujineysaa inay tahay cufnaanta jilicsanaanta 'intervertebral disc' ee laga soo saaray derbiga dibedda. Baadhitaanku badanaa wuxuu saameeyaa dhabarka hoose ama qoorta - markay tahay soo noqoshada afka ilmo-galeenka, tani (caadi ahaan) way ka khatar badan tahay lumbar (dhabarka hoose) prolapse - tani waa sababta oo ah qaar ka mid ah xididdada xididdada ee qoorta i.a. waxay maamushaa shaqada diaphragm / neefsashada. 'Ilmo-galeenka' waxaa loola jeedaa in ay tahay qoorta oo ay waxyeelleeyaan.
Calaamadaha qoorta oo ay u soo dhacdo
Astaamaha caadiga ah waa shucaac ama xanuun gacmo xanuun / raaxo la'aan asal ahaan ka soo jeeda qoorta. Badanaa waxaa loo yaqaan xanuunka neerfaha. Calaamaduhu way kala duwanaan doonaan iyadoo ku xiran hadday tahay xidid xidid oo ay wax yeeleen iyo in kale - sidaan soo sheegnay, soo dhicintu waxay astaan ​​u noqon kartaa haddii uusan jirin wax cadaadis ah oo ku saabsan xididdada xididdada u dhow. Haddii ay runti jirto jacayl xidid ah (qanjaruufo hal ama in ka badan xididdada dareemayaasha) astaamaha way kala duwanaan doonaan iyadoo ku xiran hadba xididdada xididku saameeyay. Tani waxay sababi kartaa labada dareen (kabuubyo, xoqid, shucaac iyo dareemid daciif ah) iyo mootada (awoodda muruqyada oo hoos u dhacda iyo xirfadaha dhaqdhaqaaqa wanaagsan) calaamadaha. Isku xoqid dheer ayaa sidoo kale u horseedi karta hoos u dhaca muruqyada ama muruqowga oo xumaada (atrophy).
Soo-kicintu ma dhaawacdaa?
Soo dhicitaanku wuxuu sababi karaa calaamado ama maahan - dhaawaca saxanka micnaheedu ma aha qoorta iyo cududda oo xanuun. Si kale haddii loo dhigo, dadku way ku socon karaan iyaga oo wata prolapse oo gabi ahaanba xanuun ma noqon karaan. Tan waxaa lagu sii go'aamiyaa haddii uu jiro cadaadis / qanjaruufo xididdada xididdada ilmagaleenka ee ku dhow - taas oo lagu go'aamiyo booska prolapse-ka, cabbirka, jihada iyo muuqaalka.
Xannuunka iyo Xanuunka Radiantka
Calaamadaha noocan oo kale ah waxay noqon karaan kabuubyo, shucaac, xatooyo iyo shoogga korantada ee hoos ugu dhaca gacanta - waxay sidoo kale mararka qaarkood la kulmi kartaa tabar-darri muruq ah ama murqo-xumo (iyadoo muddo dheer maqnaanshaha dareemayaasha). Calaamaduhu way kala duwanaan karaan.
Dhaqanka sheekada, xaalada badanaa waxaa si qalad ah loogu yeeraa 'saxanka qoorta oo siibanaya'. - tani waa khalad maaddaama saxannada ay ku dhegsan yihiin inta u dhexeysa vertebra ilmagaleenka mana 'siiban karaan' - kaliya cufnaanta jilicsan ee ku jirta saxanka ayaa sidan u dhaqaaqi karta (yacni ma ahan saxanka laftiisa, laakiin kaliya waxa ku jira). Xor ayaad u tahay inaad nala soo xiriirto Boggayaga Facebook haddii aad wax su'aalo ah ama ra'yi ah qabtid.
Cudurka xididka xididka ka dhanka ah C7 (waxay ku dhici kartaa prolapse in C6 / C7)
Dareenka dareenka: daciifnimo ama kordhay dareenka ayaa ku dhici kara dermatoma la xidhiidha oo ku fida oo dhan fidinta farta dhexe.
Xirfadaha dhaqdhaqaaqa: Muruqyada leh dareemayaasha dareemayaasha ee ka yimaada C7 sidoo kale waxay lahaan karaan tabar daciif ah inta lagu jiro baaritaanka murqaha. Liiska muruqyada la saameyn karo wuu dheer yahay, laakiin inta badan saameyntu waxay si muuqata u muuqataa marka la tijaabinayo xoogga triceps ama lattissimus dorsi, maadaama kuwani kaliya ay ka helayaan calaamadaha neerfaha xididka C7. Muruqyada kale ee ay saameysey, laakiin sidoo kale ay bixiyaan neerfaha kale, waa muruqyada hore (oo ay ku jiraan pronator teres iyo flexor carpi ulnaris), iyo sidoo kale curcurka curcurka iyo curcurka curcurka.
FYI: Sidaas awgeed waa xididka xididdada hoose ee saameeya hoos u dhaca heerarka qoorta - haddii uu jiro soo-kabasho C7 / T1, waa xididka xididdada C8 ay saameysay. Laakiin haddii ay jirto soo noqnoqasho T1 / T2, yacni inta udhaxeysa labada laf-dhabarta sare, markaa waa xididka xididada T1 ay saameyn karto.
Maxay qoorta u soo dhacdo badankood waxay ku dhacaan laf-dhabarka ilmo-galeenka hoose?
Sababta labadan meelood inta badan loo saameeyo waxaa ugu wacan anatomy saafi ah. Kuwani waa aagag ku yaal salka hoose ee qoorta oo sidaas awgeed waa inay qabtaan shaqada inteeda badan marka ay timaado nuugista shoogga iyo qaadista madaxa. Waxay sidoo kale si gaar ah u nugul yihiin markay ka shaqeynayaan boosaska foorarsiga ah iyo shaqooyinka joogtada ah (tusaale ahaan taas oo sidoo kale ka mid ah boosaska inta badan qoorta laad iyo xanuunno ka dhacaan). Waxyaabo badan oo aan ogayn ayaa ah in nabarradan degdega ah iyo 'googo' qoorta ay u dhacaan sidii farsamo difaac ah si looga hortago inaad waxyeello u geysato dhismooyinka jilicsan sida jilicsanaanta jilicsan Si fudud ayaa habka jidhku kuugu sheegaa inaad isku dayday inaad sameyso wax aanad haysan murqo kugu filan oo aad ku shaqeyso ama aad ku shaqeysid - waxayna kaa codsaneysaa inaad u hogaansato digniinta. Dad badan ayaa doorta inaysan dhegeysan marka jirku soo sheego khatarta sidaas awgeedna dhaawacyada walbahaarku dhacaan - sida. dhaawacyada maqaarka ama cilladaha ku dhaca qoorta.
Sidoo kale aqri: - 5 jimicsi oo adiga kuu gaar ah adiga oo qoorta udhacay
Maxaad qoorta uga bogsataa? Sababo macquul ah?
Waxaa jira qodobo badan oo go'aaminaya inaad ku dhacdo prolapse, labadaba epigenetic iyo hidde-wadaha.
Sababaha lagu dhasho ee sababi kara inaad dib udhacdo, waxaan kaheleynaa dhabarka iyo qoorta qaabka iyo gooladaha - tusaale ahaan, tiir aad u toosan oo qoorta ah (waxa loogu yeero toosinta afka ilmagaleenka) waxay u horseedi kartaa xoogag culeys ah oo aan lagu qeybin guud ahaan kala-goysyada, laakiin markaa halkii, waxay ku dhacdaa waxa aan ugu yeerno kala-goysyada kala-guurka tan iyo markii xoogaggu ay si toos ah ugu socdaan safka iyagoo aan laga yareyn qallooca. Kala-guurka kala-guurka waa aagga halka qaab-dhismeedku u gudbo mid kale - tusaale ahaan waa kala-wareegga ilmo-galeenka (CTO) halkaas oo qoorta ay la kulanto laf-dhabarka wadnaha Sidoo kale maahan wax isku dhac ah oo ku jira isku-dhafkan gaarka ah ee u dhexeeya C7 (qoorta hoose ee hoose) iyo T1 (wadajirka sare ee wadnaha) ku dhaca dhacdooyinka ugu badan ee prolapse ee qoorta.
Anatom ahaan, mid ayaa sidoo kale ku dhalan kara derbi daciif ah oo khafiif ah (annulus fibrosus) oo ku jira maqaarka 'intervertebral disc' - tani waxay, dabiici ahaan ku filan, waxay leedahay khatar sare oo ah inuu ku dhaco dhaawac disc / disc prolapse.
Sababaha epigenetic waxaa loola jeedaa xaaladaha nagu hareeraysan ee saameeya nolosheena iyo xaaladdeena caafimaad. Kuwani waxay noqon karaan xaalado dhaqan-dhaqaale sida saboolnimo - taas oo macnaheedu yahay inaadan awood u lahayn inaad u tagto dhakhtar markii xanuunka neerfaha uu markii hore bilaabmay, taasna waxay kuu horseedday inaadan awoodin inaad sameyso waxyaabihii lagama maarmaanka u ahaa in la sameeyo ka hor inta uusan dhicin burburka. . Waxay sidoo kale noqon kartaa cunto, sigaar cabbid, heer dhaqdhaqaaq iyo wixii la mid ah. Ma ogtahay, tusaale ahaan, in sigaarcabku u horseedi karo murqo xanuun badan iyo bogsasho liidata sababo la xiriira wareegga dhiigga oo yaraada.
Shaqo / rar
Goob shaqo oo ay kujiraan wiishash farabadan oo culus oo kusugan boosas aan fiicnayn (tusaale ahaan horay usocod leh qaloocin) ama cadaadis joogto ah (cadaadis xaga dambe ah - tusaale ahaan xirmooyin culus ama jaakada xabadaha celisa) waxay waqtiga kadib u horseedi kartaa culeys xad dhaaf ah iyo waxyeelo jilibka hoose saxannada intervertebral. Tanina waxay sababi kartaa cufnaanta jilicsan inay soo daadato oo ay aasaas u noqoto soo dhicitaan. Xaaladda soo noqoshada qoorta, waxaa badanaa la arkaa in qofku haysto xaalad adag oo shaqo raadis ah - iyo waxyaabo kale, dhakhaatiir dhowr ah, dhakhaatiirta qalliinka iyo kaaliyeyaasha ilkaha ayaa saameynaya sababo la xiriira jagooyinkooda mararka qaarkood markay shaqeeyaan.
Kumaa saameeyay soo-dhawaanshaha xubinta taranka dumarka?
Xaaladda ayaa ugu horreyn ku dhacda dadka da'da yar ee jira 20-40 sano. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in cufnaanta gudaha (nucleus pulposus) ay wali jilicsan tahay da 'daan, laakiin in si tartiib tartiib ah ay ugu adkaato da'da sidaasna ay ku yartahay fursada soo dhicitaanku. Dhinaca kale, badiyaa waxaa jira isbeddello xiran iyo laf-dhabarka sababaha ugu badan ee xanuunka lafaha kuwa ka weyn 60 sano.
- Qoorta waa qaab dhismeed murugsan oo u baahan xoogaa tababar iyo fiiro gaar ah sidoo kale.
Prolapsku kaligiis ma baaba'ayaa? Mise caawimaad ayaan u baahanahay?
Soo-saariddu waa qaab-dhismeed firfircoon. Taasi waa, jirku wuxuu u aqoonsan yahay inay tahay dhibaato wuxuuna si joogto ah isugu dayaa inuu jebiyo isagoo u diraya goobta enzymes. Enzymes-yadaani waxay iskudayaan inay 'cunaan' qaybta udubdhexaadka ee ku riixday derbiga dibedda. Marka adduun ku habboon, soo-dhaca ayaa tartiib tartiib u noqonaya wuuna baabi'i doonaa. Dhibaatada kaliya ee jirta ayaa ah in qof soo dhacay uu nasiib daro badanaa ku dhacday tan sababtuna tahay dabeecado aan fiicnayn, farsamada qaadista oo liidata / farsamada tababarka iyo guud ahaan tababarka oo aad uyar oo muruqyada / dhabarka ah. Qofka waa inuu sidaa darteed gabi ahaanba beddelaa dabeecadda, caadooyinka jimicsiga iyo qaababka dhaqdhaqaaqa - taasna waa ka sahlan tahay in la yiraahdo intii la qabtay. Markaa way hagaagi kartaa caawimaad yar oo dibadeed ah sida; dhaqtarka jimicsiga jirka ama lafopractor casri ah (qof ku shaqeeya murqaha, kalagoysyada iyo jimicsiga) - kuwani waxay kuu sheegi karaan waxaad qaldan tahay iyo waxa diiradaada la saari doono mustaqbalka si loo kordhiyo fursada bogsashada.
Baadhista soo noqoshada qoorta
Baadhitaan caafimaad iyo taariikh qaadasho ayaa udub dhexaad u noqon doonta baaritaanka 'soo dhaca ilmo-galeenka'. Baaritaan dhameystiran oo ku saabsan muruqyada, neerfaha iyo shaqada wadajirka ah ayaa muhiim ah. Sidoo kale waa inay noqotaa mid suurtagal ah in laga reebo baaritaanada kale ee kaladuwan. U tag dhakhtar, lafopractor ama daaweeye gacanta si loo ogaado xanuunkaaga - seddexdan xirfadood ee caafimaadka guud loo idmaday waxay leeyihiin waxbarashadii ugu dheerayd waxayna sidoo kale xaq u leeyihiin in loo gudbiyo sawirka ogaanshaha cudurka (tusaale. Baaritaanka MRI haddii tan loo baahdo).
Calaamadaha neerfayaasha ee prolapse makaanka afkiisa
Baadhitaan qotodheer oo neerfaha ah ayaa lagu baari doonaa xoogga qaybaha u hooseeya, dareenka dambe ee dambe (patella, quadriceps iyo Achilles), dareenka iyo waxyaabaha aan caadiga ahayn.
Baadhitaanka ogaanshaha sawirka soo dhaca ilmo-galeenka (raajada, MRI, CT ama ultrasound)
Raajooyin ayaa soo bandhigi kara xaaladda lafdhabarta iyo qaababka kale ee jirka ee khuseeya - nasiibdarro ma arki karto unugyada jilicsan ee hadda jira iyo wixii la mid ah. Mid Baaritaanka MRI ayaa ah tan ugu badan ee loo adeegsado baarista soo-goynta ilmo-galeenka. Waxay muujin kartaa sida saxda ah waxa sababa isku-buuqa dareemayaasha. Bukaannadaas aan qaadi karin MRI sababaha ka hortagga uurka awgeed, CT waxaa loo isticmaali karaa isbarbar dhig si loo qiimeeyo xaaladaha.
Raajo ee prolapse makaanka afkiisa
Kama arki kartid soo dhaca ilmo-galeenka (qoorta oo u soo baxda) raajada. Tani waa sababta oo ah raajada sawirku ma arki karo unugyada jilicsan, jilicsanaanta iyo seedaha si wanaagsan oo ku filan. Taasi waa sababta loo isticmaalo baaritaanka MRI si loo ogaado haddii ay jiraan dhaawacyo maqaarka ah. Waxa aan ku aragnay raajadaani waa qoorta oo leh qoorta qoorta - tan waxaan ku aragnaa, iyo waxyaabo kale, oo ku saabsan qaloocinta qoorta oo toosan (ku dhowaad dib u soo noqosho leh)
Sawirka MRI ee soo dhaca qoorta
Imtixaankan MRI wuxuu muujinayaa qanjirada laf-dhabarka inta u dhexeysa laf-dhabarka ilmo-galeenka C6 iyo C7 sababo la xiriira faafinta herniinka.
Sawirka CT ee soo dhaca ilmo-galeenka
Halkaan waxaan ku aragnaa sawir CT ah oo aan lahayn kala duwanaansho muujinaya qoorta iyo madaxa. CT waxaa loo isticmaalaa marka qofku uusan qaadan karin sawirka MRI, tusaale ahaan. iyadoo ay ugu wacan tahay birta jirka ku jirta ama qalabka wadnaha lagu rakibay ee lagu beero.
Daaweynta prolapse makaanka afkiisa
Midna caadi ahaan ma daaweynayo soo-baxa laftiisa, laakiin halkii calaamadaha iyo cilladaha ku xeeran dhaawaca laftiisa. Tani waxay ku lug yeelan kartaa daaweynta jireed ee muruqyada adag ee dhow iyo daaweynta wadajirka ah ee kala-goysyada adag si loo hubiyo shaqada ugu fiican ee suurtogalka ah. Daaweynta jarista (oo sidoo kale loo yaqaan jajabka laf-dhabarka) ayaa sidoo kale noqon karta aalad waxtar leh oo looga saari karo cadaadiska cadaadiska meel ka hooseysa vertebrae, saxannada iyo xididdada xididdada. Hababka kale ee daaweynta waa cirbado qallalan, daaweynta laser-anti-bararka iyo / ama daaweynta muruqyada cadaadiska muruqyada. Daaweyntu dabcan waxay la socotaa tababar tartiib tartiib ah. Waa kuwan liiska daaweynta loo isticmaalo soo-dhaca ilmo-galeenka. Daaweynta waxaa fulin kara, iyo kuwo kale, daaweeyeyaal caafimaad oo loo oggol yahay, sida jimicsiga jirka, lafopractors iyo daaweynta bukaanka. Sidaan soo sheegnay, waxaa sidoo kale lagugula talinayaa in daaweynta lagu daro tababar / jimicsi.
Duugista, shaqada muruqyada, abaabulka wadajirka ah iyo farsamooyinka jirka ee la midka ah waxay bixin karaan calaamadaha xanuunka iyo kororka wareegga dhiigga ee aagagga ay dhibaatadu saameysey.
Guud ahaan waxaa lagula talinayaa in bukaanka qaba soo-dhaca ilmo-galeenka lagu farayo inay si sax ah u jimicsadaan iyada oo loo marayo jimicsiga jirka ama takhtarka kale (tusaale, lafopractor casri ah ama daaweeye gacanta ah). Dhakhtarka jimicsiga jirka ayaa sidoo kale kaa caawin kara gargaarka astaamaha.
Qalliinka / qalliinka
Haddii xaaladdu aad uga sii darto ama aadan la kulmaynin horumar xagga daaweynta muxaafidka ah, qalliin ayaa laga yaabaa in loo baahdo si loo yareeyo aagga. Qalliinku marwalba waa khatar waana meesha ugu dambaysa ee lagu tago.
Daaweynta laser-ka oo leh qalab 3-aad ah laser qalab wuxuu kaloo muujiyey saameeyn dukuminti ah oo ku saabsan prolapse qoorta. Daaweyntu waxay kicin kartaa dib-u-hagaajin waxayna sababi kartaa xaaladdu inay si dhakhso leh u bogsato si dhakhso leh daaweyn la'aan. Marka loo eego Xeerarka Ilaalinta Shucaaca, daaweynta laser-ka waa in ay isticmaalaan oo keliya shaqaalaha caafimaadka idman, iyo qawaaniinta ayaa sheegaya in kaliya dhakhtar, chiropractor iyo jimicsiga jimicsiga loo oggolaaday isticmaalka noocaas ah.
Daaweynta isgoyska / cox therapy
Kala-goynta iyo kursiga kala-goynta (oo sidoo kale loo yaqaanno bench bench ama cox bench) waa aaladaha kala-soocidda laf-dhabarka oo loo isticmaalo saameyn yar. Bukaanku wuxuu jiifaa kursiga keydka si meesha loo soo saaro / loo kala jajabiyo ay ugu dambeynto qeybta keydka ee kala qaybisa sidaasna uu ku furo laf-dhabarka iyo laf-dhabarka la xiriira - taas oo aan ognahay inay bixiso astaamo. Daaweynta badanaa waxaa sameeya lafopractor, daaweeyaha gacanta ama jimicsiga jirka.
Sidoo kale aqri: 11 Layli ka dhan ah Ishialgi
Qalliinka soo noqoshada qoorta
Dhakhaatiirta qalliinka lafa-beelka dadweynaha waxay dajiyeen shuruudo adag oo la xiriira in qalliinka foolashada la sameeyo iyo in kale - nasiib darro rugaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay had iyo jeer ma sameeyaan tan. Sababta ay aadka u daran yihiin ayaa ah in qaliinka qoorta uu kujiro khatar sare hadii wax qaldamaan - sida xanuunka oo sii xumaada ama dhaawacyada joogtada ah. Sidaa darteed, qalliinka qoorta waxaa loo qoondeeyay oo keliya kuwa runtii u baahan iyo kuwa tusaale ahaan. wuxuu leeyahay CSM.
Daraasado dhowr ah ayaa muujiyay in qalliinadu badanaa ay leeyihiin saameyn muddo gaaban ah, laakiin in muddada dheer ay u horseedi karto calaamado iyo xanuun sii xumaanaya. Tan waxaa laga yaabaa inay sabab u tahay sameynta unugyada nabarrada / unugyada dhaawaca ee aagga la shaqeynayo, taas oo si la mid ah soo-kabashada la saaray ay cadaadis ku saareyso xididdada neerfaha ee u dhow. Farqiga kaliya ayaa ah in unugyada nabarrada iyo unugyada dhaawaca ah aan lagu shaqeyn karin. Mid waa inuu sidoo kale tixgeliyaa in qalliinka lagu sameeyo meel aad u xasaasi ah, oo sidaas darteed ay jirto fursad ah in dhakhaatiirta qalliinka ay dhaawici doonaan neerfaha - taas oo iyaduna u horseedi karta astaamaha neerfaha oo sii xumaada / xanuunno iyo / ama si joogto ah hoos ugu dhaca awoodda muruqyada iyo soo-celinta.
Ka dooro jimicsiga madaxa sare
Waxay noqon kartaa mid aad u daal badan, xanuun badan oo jahwareer leh oo soo noqoshada qoorta ah, laakiin waxaan si adag kugula talineynaa inaad isku daydo dhammaan xulashooyinka ka hor intaadan mindiyaha hoostiisa marin. Haa, dhakada ayaa laga yaabaa inay tahay 'doorashada ugu soo jiidashada badan' oo leh balanqaadyadeeda beenta ah ee xalka degdegga ah, laakiin tababarka tartiib tartiib ah had iyo jeer waa kan ugu fiican (laakiin ugu caajis badan) xulashada. U shaqee si adag oo ujeedo leh. Samee hadafyo-hoosaadyo oo ka hel caawimaad dhakhtar - habkan waxaad ku joogi kartaa dhiirrigelinta oo aad uga fogaan kartaa inaad sameyso jimicsiyo ay tahay inaanad sameynin.
Layli ka dhan ah soo-goynta ilmo-galeenka
Layliyo loogu talagalay in lagu yareeyo astaamaha calaamadaha qoorta ayaa ugu horreyntii diiradda saari doona yareynta dareemayaasha ay saameeyeen, xoojinta muruqyada ku habboon iyo gaar ahaan murqaha wareega, garabka iyo qoorta. Waxyaabaha kale, waxaan kugula talineynaa inaad diirada saarto si aad u tababarto murqaha garabkaaga. Waxaan sidoo kale kugula talineynaa inaad ka hesho barnaamij tababar gaar ah takhtar kugu habboon adiga. Xilliga dambe ee horumarka, tababarka wadida ayaa sidoo kale khuseeya.
Maqaalka laxiriira: - Sida Loogu Xooggan Yahay Garbaha Iyo Garbaha Garbaha
Akhrin dheeraad ah: - Xanuun qoorta ah? SIDAN WAA INAAD OGAATO!
Su'aalaha inta badan la isweydiiyo ee ku saabsan soo noqoshada qoorta / soo noqoshada qoorta / dhaawaca maqalka:
Miyuu qofku ku heli karaa cune xanuun cunaha markay qoorta ka soo baxdo?
Haa, qofku wuu ku dhici karaa dhuun xanuun sababtoo ah muruqyada qoorta oo kacsan taas oo loola jeedo xanuunka xagga dambe, hore ama dhinaca qoorta. Tani waxay badanaa ku lug leedahay myalgia ee sternocleidomastoid - taas oo ah muruq inta badan ku badan ficil-celinta qoorta sababtoo ah rabitaankeeda inay ilaaliso aagga dhaawacmay. Muruqyada kale ee xanuunka u keeni kara qoorta waa trapezius sare, scalenii iyo muruqyada daanka (digastric and pterygoids).